Berita Update Online: cara memakai jilbab segitiga modern
cara memakai jilbab segitiga modern Olee iyi hijab n'oge a rektangulu bụ otu ụzọ na-eyi ndị hijab na- ole họọrọ . N'ihi na oge a hijab dikreasikan ọ pụrụ asatọ ahụ masịrị ya mkpa ha. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ pashmina hijab n'ihi na ọ bụ ogologo oge otú ahụ ọ dị mfe iji mee ka e kere eke . Ma, anyị na- eme ka ọ na-erughị fashionable kere eke na-eji akụkụ anọ hijab .
Olee iyi hijab n'usoro nke ndị na-esonụ anọ nwaanyị agba pink ya mere anya ọzọ girly na otutu ndị inyom na-amasị a na agba . Na agba pink , ị Aga anya ọzọ esighị na -atọ ụtọ . Nwere mmasị iyi ya ? Lelee ya nyochaa n'okpuru ebe a, dị ka e hotara site na vemale.com .
Tupu ị malite i kwesịrị ịkwadebe ọkacha mmasị gị akụkụ anọ hijab , n'ime nkpuru , hijab ntụtụ na ọla ntị dị ka ngwa mma ịgbakwunye a mara mma echiche . Na-aga na-ahụ na-eso nkuzi .
Lagkah mbụ na-eji n'ime hijab headscarf na ekwekọghị agba nke rektangulu . Mgbe ahụ, lee otu akụkụ nke njedebe nke ịchafụ na -edebe ya isi na otu njedebe ikpere ntị . Ụzọ abụọ na ubé oblique ma ọ bụ diagonal ọkwá ya dị ka e gosiri n'elu.
Nzo ukwu nke abuo , pinned ntụtụ ka ọ ghara ịgbanwee anya kwesiri onyinye n'oge n'akuku nso nti . Nzo ukwu nke ato , ogologo outstretched ubọk, jidere ala akuku na ịdọrọ ya n'azụ gị isi nri ntị , iji mechie ihe agba na aka nri agba .
Na nzo ukwu nke ano , pinned na ntụtụ na akụkụ ahụ e dọtara mmasị ha nri ntị dị ka e gosiri n'elu. Ise na- ebuli ndị fọdụrụ nke veel nke ka na- na-ekpuchi n'azụ ya isi dị ka enyeghachi ya okpukpu anọ .
Site yi hijab ka nkuzi n'elu, n'ezie , a ga- atụkwasịrị n'echiche nke na nani ikwere n'ime onwe gị . Ị ga- anya otú pụrụ iche ma maa mma . Anya dị ọhụrụ nwere mmasị pink agba akara ererimbot ke ata , ọ bụghị ike na -anọgide na okobotde n'agbanyeghị na na-eji akụkụ anọ hijab .
Diposting oleh Lisa Fernandez di 11.07